कतै चीनले कोरोनाबाट मर्नेहरुको संख्या त लुकाईरहेको छैन् ? १.५ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता कसरी भए वेपत्ता ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कतै चीनले कोरोनाबाट मर्नेहरुको संख्या त लुकाईरहेको छैन् ? १.५ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता कसरी भए वेपत्ता ?
कतै चीनले कोरोनाबाट मर्नेहरुको संख्या त लुकाईरहेको छैन् ? १.५ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता कसरी भए वेपत्ता ?
चैत १३ गते, २०७६ - १७:३४
डबली विशेष, शीर्ष समाचार
काठमाडौं । कोरोना भाइरस र यसको प्रभावबारे चीनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबारे निकै आशंकाहरु जन्मिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय जगतमा कोरोनाबाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्याबारे चीनले दिएको तथ्यांकमा व्यापक आशंका छन् । केहि ठुला मानिएका अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले चीनले तथ्यांकहरु लुकाइरहेको पनि टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैबीच कोरोनाको मुख्य प्रभाव क्षेत्र वुहानमा १.५ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता गायब भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसलाई आधार मान्दै केहि सञ्चारमाध्यमले ती १.५ करोड मानिस वेपत्ता नभई कोरोनाबाट मरेको आशंका गरेका छन् ।
चीनकी एक ब्लगर जेनिफर जेंगले एक तथ्य सार्वजनिक गर्दै १.५ करोड मानिसको बारे सबाल खडा गरेकी छिन् । जसमा उनले चीनमा मोबाइल प्रयोकर्ताको विषयमा विश्लेषण गरेकी छिन् ।
२ महिनामा १.४६ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता गायब
चीनको मोबाइल कम्पनी चाइना मोबाइलद्धारा जारी आंकडालाई हेर्दा जनवरीदेखि फ्रेबुअरीसम्म ८.११६ मिलियन अर्थात् ८१ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता हराएका छन् । चीनको दोस्रो कम्पनी चाइना यूनीकोमको जनवरीको आँकडामा १ मिलियन अर्थात १० लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता गायब भएका छन् ।
यसैगरी चीनको अर्को ठूलो मोबाइल सर्भिस प्रदायक कम्पनी चाइना टेलीकम्यूनिकेशनको आंकडाअनुसार फ्रेबुअरी महिनामा ५.६ मिलियन अर्थात् ५६ लाख प्रयोगकर्ता गायब भएका छन् ।
यी तीन मोबाइल कम्पनीको आँकडालाई जोड्दा कुल १.४६ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता गायब भएको देखिन्छ । प्रश्न गम्भिर उठेको छ, यी हराएका मानिस कहाँ गए ? किन मोबाइल एकैपटक चलाउन छोडे ? कतै कोरोना भाइरसको सिकार त भएनन् ?
चीनले हालसम्म कोरोनाबाट ३,२८७ जनाको मात्रै मृत्यु भएको बताएको छ । तर प्रश्न यी मानिस कहाँ हराएका छन् ?
कतै चीन झुठ त बोलिरहेको छैन ?
जब चीनमा कोरोनाको प्रकोप सुरु भयो त्यस समय विश्वभर चीनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकबारे निकै प्रश्नहरु गरिएका थिए । चीनले सुरुवातमै तीन सातासम्म कोरोनाको बिरामीबारे तथ्य नै लुकाएको थियो । करीब तीन हप्ता पछि भयावह बनेको स्थितिमा पनि थोरै संख्या देखाएको भन्दै निकै प्रश्न उठेको थियो ।
टेन्सेन्टको कम्पनीको रिपोर्टमा पनि ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको उल्लेख छ
पछिल्लो महिना चिनियाँ कम्पनी टेनसेन्टको एउटा रिपोर्ट लीक भएको थियो । जसमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २४ हजार ५८९ बताइएको थियो । लीक रिपोर्टमा १ लाख ५४ हजार मानिस संक्रमित भएको दाबी गरिएको थियो । तर त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको केहि समयमा नै उक्त टेनसेन्ट कम्पनीले तथ्यांकमा फेरबदल गरेको थियो । कम्पनीले सरकारी तथ्यांकसँग मिलाउन तीन पटकसम्म आफ्नो तथ्यांकलाई मिलान गरेको थियो ।
स्याटलाईट तस्बीरबारे भएको थियो चर्चा
गत फ्रेबुअरीको पहिलो साता चीनको वुहान र चोंककिंगको केहि स्याटलाईट तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए । जसमा ठुलो क्षेत्रफलमा केहि जलाईरहेको देखिन्थ्यो । उक्त क्षेत्रको आकाशमा भारी मात्रामा सल्फरडाईअक्साईडको ग्याँस देखिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस समय वुहानको वायुमण्डलमा सल्फरडाईअक्साईडको स्तर १७ सय यूजी/घन मीटर पाइएको थियो । जुन सामान्य अवस्थाभन्दा २१ गुणा बढि हो । विशेषज्ञले मृतक प्राणीको लाश जलाउँदा मात्रै त्यस्तो ग्यांस निस्कने भन्दै बुहानमा केहि प्राणीको लास जलाइएको बताएका थिए ।
त्यस समय वुहान र चोंककिंगको आकाशमाथि सल्फरको मात्रा अत्याधिक देखिएपछि एक इन्टेलवेभ नामको कम्पनीले एकैपटक १४ हजार शव जलाएको दाबी गर्दै आफ्नो तथ्य प्रस्तुत गरेको थियो । जसको तस्बिर चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै भाइरल बनेको थियो ।
सल्फरडाईअक्साईड ग्याँस दुवै शहरको माथि देखिएको थियो । यी दुवै शहर कोरोनाबाट निकै प्रभावित बनेका थिए । उक्त समय चीनले तथ्य लुकाएको भनेर पनि निकै अड्कलबाजी गरिएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा
चैत १३ गते, २०७६ - १७:३४ मा प्रकाशित
कस्ता कागजपत्र भएकाले विदेशबाट फर्किने प्राथमिकतामा पर्छन् ?
रुकुमको सोती घटना प्रकरण : मुख र टाउकोमा कपडाले बाँधेको अवस्थामा बेपत्ता शाहीको शव फेला
आज थपिएका २८८ जना संक्रमित कुन जिल्लाका कति ? हेर्नुहोस् बिवरण !
मंगलबार एकैदिन २८८ जना संक्रमित थपिए
कर्णालीमा फेरि थप २९ जनामा कोरोना पुष्टि
मोदीलाई नारायणकाजी श्रेष्ठको आग्रह – पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिएर पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि लिँदैनौ भनेर सच्चिनुस्
नेपाल फर्कन चाहनेलाई पाँच दिनभित्र राजदूतावासमा विवरण बुझाउन अनुरोध
स्याङजा र पर्वतमा ५/५ जना संक्रमित थपिए